विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पार्वती जस्तै श्रीमती भए कसरी जीवन फेरिन्छ ? जसका श्रीमान अरबमा थिए -हेर्नैपर्ने (भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारविदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पार्वती जस्तै श्रीमती भए कसरी जीवन फेरिन्छ ? जसका श्रीमान अरबमा थिए -हेर्नैपर्ने (भिडियो सहित)
November 8, 2020 admin समाचार 10185
सर्लाहीकी पार्वती श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको लागि अरब गएका आफ्ना श्रीमानलाई स्वदेश फर्काएकी छन् । घर खर्च लगाउने विदेश गएका उनका श्रीमान नेपालमै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्वेदश फर्किएका हुन् । अहिले उनका श्रीमानले नेपालमै रिक्सा चलाउछन् भने उनको सानो व्यवसाय छ ।
उनका श्रीमानले अरबमा रहँदा ६० हजार सम्मको आम्दानी गर्ने गरेका थिए । अहिले दुबै जनाको गरेर त्यही ६० देखी ७० हजार सम्मको आम्दानी छ । यसमा दुबैजना खुसी छन् ।
पहिला पहिला पार्वतीलाई गाउँघरमा पौरख गरेर आफैंले घर चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थिएन । श्रीमानले पठाएको पैसा कसरी बचत गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन ।
November 25, 2020 admin समाचार 2877
April 10, 2021 admin समाचार 1525
January 17, 2021 admin समाचार 8607